National University of Food Technologies - Isifundo e-Ukraine
National University of Ukudla Technologies Yokuxhumana
isifinyezo : rationality
Wasekelwa : 1884
Ungakhohlwa xoxa National University of Ukudla Technologies
Faka isicelo National University of Ukudla Technologies
National University of Food Technologies – isakhiwo enamandla zemfundo, eyaziwa futhi ngokujulile abahlonishwa hhayi kuphela e-Ukraine nakulo phesheya. Kuphakeme kuphela isikhungo Ukraine technical ezemfundo, esiqeqesha ongoti abaqeqeshiwe in abasemazingeni ahlukahlukene emfundo – kusukela “uchwepheshe junior” ukuze “master” – le 215 izinhlelo zokufundisa ukudla, inyama, yobisi, yezemithi, kwamakha kanye nezinye izimboni eziningi.
Umlando esikoleni sethu – ngokuyikho okuyingxenye yomlando. It kwaqala ngo 1884, lapho Smelyanskoye refinery wavula amakilasi lobuchwepheshe – the Empire Technical School ngqá ukuqeqesha ochwepheshe, ukukhiqizwa osokhemisi abaculi ushukela. Zaba isisekelo ukusungulwa kwe-Institute ushukela Kiev umkhakha. Yena ngokuphindaphindiwe washintsha igama layo: Kyïv Institute of Sugar Industry and Sugar Kyïv Institute of Technology (1930), Kyïv Institute of Industry Chemical Technology Ukudla (1933), Kyïv Technological Institute of Food Industry University. AI Mikoyan (1935), Ukraine State University of Technology Food (1993), National University of Technology Food (2002). ayizange ithuthuke, isifiso collective ngasiphi isigaba yentuthuko ezingokomlando isimo kuphela ukulungiselela Ochwepheshe eliphezulu kakhulu, ukufundisa abazinikele, ephikelelayo, abantu creative ukutshala zonke amakhono akhe, lonke ulwazi, konke ukuphila kule ukuthuthukiswa avumelanayo abafundi babo.
Eminyakeni edlule kwamanikelela esikolweni sethu uye wanda kakhulu ezindaweni Palette futhi amakhono kanye yaziwa hhayi kuphela ezwe elaliyi-USSR, kodwa kubuye kube igunya waqaphela phesheya.
National University of Food Technologies – eyinkimbinkimbi sezemfundo, okwadala iluphu closed pre-university, isigaba kanye nokuqeqeshwa postgraduate kanye ukuphinda uqeqesho. Lesi sakhiwo sinamagumbi okuhlala 20 amandla, 2 Isikhungo yokuqhubeka Education and 13 zobuciko nasemakolishi ukuthi zitholakala emadolobheni ahlukene Ukraine.
Zonke emkhakheni wethu wokufundisa bathole ulwazi mayelana 30,000 abafundi kanye abaqeqeshwayo. Inqubo ukuqeqeshwa kuhilela okungaphezu 150 odokotela kanye noprofesa, Ngaphezu kwe 480 candidates. Phakathi kwazo – le 21 amalungu e-National Academy of Sciences of Ukraine futhi academy igatsha, 15 ababethole umklomelo State of Ukraine, 16 lososayensi nonjiniyela ovelele, nabafundisi.
abafundi – Library Scientific, esemgwaqweni esakhiweni ehlukile futhi ine phezu 1 abayizinkulungwane mln.210 ezincwadi, lokudlela buffet, umfundi amakamu zokungcebeleka Black Sea ZaseCarpathos, campus, okuletha ndawonye amahostela eziyisithupha, esikhungweni semfundo futhi kwezemidlalo swimming pool yesimanje.
Inyuvesi wadala izimo for development creative kanye ngokomzimba labafundi. Baningi Imisebenti yebuciko amateur, amaqembu art, amakilabhu ezemidlalo, Centre for imfundo Cultural and tebuciko.
isikhathi zisebenza ngokungakhathali ludlulele. Wahlala e neminyaka ecishe 130 kweminyaka yocwaningo, hard, umsebenzi ephefumulelwe, onqobayo. umlando wethu – Umlando we ezifezwayo kanye nempumelelo elingenakuphikwa, futhi kuholela isinyathelo esifanele ngalokho. Present – Isikhathi sokuba kudalulwe lomuntu ngamunye ngokwesibalo ubizo lwakhe, talent kanye namakhono. The National University of Food Technologies uye wadala zonke izimo ngoba lokho kudalula, othisha bethu bayofundisa elite engakuthola emphakathini. Izikole yesayensi kanye Pedagogical Onamandla, Abasebenzi abaqeqeshiwe yokufundisa, yesimanje base ukuqeqeshwa, ukusetshenziswa kabanzi entsha ubuchwepheshe enze kube nokwenzeka ukuba balungiselele eliphezulu ochwepheshe, kabanzi bafuna ngodli imali emakethe yezabasebenzi hhayi kuphela e-Ukraine.
abasebenzi University uhlale iyahola wentuthuko engokwesayensi neyezobuchwepheshe. A egqame bha lena ukuqashelwa Izimpumelelo zakhe zesayense kokubili e-Ukraine futhi aphesheya.
Abaphothule kulesi sikole ukhumbule izinsuku umfundi njengoba iminyaka ejabulisa kunayo yonke ekuphileni kwakhe. Kungakhathaliseki ukuthi ahlalaphi (futhi sikhungo sethu nabangaphandle kwaso ngenkathi ukhona uye waqeqesha izinkulungwane ochwepheshe emazweni amaningi emhlabeni), ezazingathandi ukusebenza, akhumbula Alma Mater zabo futhi uyaziqhenya ukuthi wafunda ukudla Kyïv.
inqubo Ukwamukelwa e-National University of Ukudla Technologies
Faculty of Inyama Dairy, Perfumery futhi Izimonyo imikhiqizo
Inyama Inyama Imikhiqizo Technology
Ubisi nemikhiqizo yobisi Technology
Fat futhi Perfumery futhi Izimonyo Technology
Jikelele kanye Inorganic Chemistry
Faculty of Bakery Nokusalungiswa esithengisa amaswidi
Bakery futhi esithengisa amaswidi Izimpahla Technology
Grain kweMvelo kanye Icubungula Technology
Faculty of Biotechnology, Ushukela Technology Namanzi Conditioning
I-biotechnology kanye Microbiology
Sobuchwepheshe Ushukela namakhekhe Water Conditioning
Faculty of Engineering Mechanics kanye Impahla Izinsiza kusebenza
Imishini kanye Izinsiza kusebenza for Ukudla Pharmaceutical Industries
Ubunginiyela, Standardization kanye Ukuqinisekisa Izinsiza kusebenza
Kwetheknoloji Izinsiza kusebenza futhi Computer Design Technology
Mechanics zobuchwepheshe Impahla Imishini
Mechanics theory kanye Technologies Resource esisindisa
Ubunjiniyela Computer Graphics
Faculty of Power Ubunjiniyela Energy Management
Isikhungo esibhekele ukushisa nokufudumala futhi Refrigeration Ubunginiyela
Electricity Supply naMandla Management
Faculty of Automation kanye Computer Systems
Automation yesilawuli Izinqubo
Automated futhi ikhompyutha Uxhumano Control Izinqubo
Faculty of Accounting, Ezezimali kanye Business Imisebenzi
Ukuphathwa kwabasebenzi kanye Ezomnotho Zabasebenzi
Ibhizinisi Foreign Language and Communication International
Ukuphathwa Umsebenzi Foreign Economic
Ezomnotho Zomhlaba Wonke
Faculty of Ihhotela-Restaurant and Tourism Lebhizinisi
Izilimi zangaphandle Professional
Sobuchwepheshe Ukudla Catering Lebhizinisi
Izivakashi kanye Ihhotela Lebhizinisi
Faculty of Ukuvutshelwa, Ukuwafaka Ukukhiqiza Control Environmental
I-biotechnology ka Fermentative Imikhiqizo Iwayini ukwenza
Izinqubo kanye Iinsetjenziswa zokukhwela Ukukhiqizwa kokudla
Biochemistry nokulawula Environmental
Faculty of Health Ukuthuthukisa Imikhiqizo Technology kanye Ukudla Ubuchule
Wellness Imikhiqizo Technology
Physical futhi Colloid Chemistry
Faculty of Training Oku-University
Ukudalwa nyuvesi buhlobene eduze umlando ekuthuthukiseni umkhakha ushukela uma Ukraine kwaba maphakathi nendlela yawo ebanzi eMbusweni Russian. nokukhula ngokushesha umkhakha ushukela edingekayo onjiniyela kanye 1940s eziningi amanyuvesi owethulwa eyala ezifana nechemistry nobuchwepheshe ngesisekelo amakhono ngokomzimba futhi zezibalo eyenza abathweswe iziqu zabo ukusebenza ngesikhathi ushukela zokuwuhluza.
Kodwa ezikhulayo umkhakha ushukela yafuna ochwepheshe okwengeziwe nakho nezimfuneko zaso zeminikelo isisekelo izikhungo ezintsha imfundo ephakeme.
Ngo 1884 amakilasi lobuchwepheshe avuleka olunzulu yokusebenza ukuqeqeshwa esikoleni phezu Smila Ushukela Letayelekile izakhiwo. Kwakuwusuku lobuchwepheshe isikhungo sokuqala zemfundo emlandweni wonke uMbuso Russian okuyinto oqeqeshiwe chemical onjiniyela nezinduna for ukukhiqizwa kukashukela. La makilasi lobuchwepheshe abaqeqeshiwe 440 Ochwepheshe esikhathini 1894-1917 iminyaka. I Kharkiv Technological Institute, wavula e 1885, onjiniyela wabuye waqeqesha ushukela refinery.
Ngo 1899 Kyïv Polytechnic Institutewas esungulwe lixhaswe ngezimali yi nezimboni, abamele izinhlangano commercial, ososayensi kanye netikhungo tembuso, kuhlanganise ushukela abakhiqizi owaziwa M. Tereschenko futhi P. womkhumbi. esihlalweni sayo chemical nezobuchwepheshe wafundisa ushukela, isitashi, ne-glucose ukuvutshelwa ubuchwepheshe. Ushukela ubuhlakani lamiswa ngesisekelo lesi esihlalweni 1929.
Ngokwe umthetho kahulumeni wase-USSR Supreme Soviet kwi ukwakheka umkhakha ngamakhasimende imfundo ephakeme institutions№1240 ka 17 April 1930, the Kyïv Isikhungo Ushukela ajwayelekile (Kisser) yasungulwa ngesisekelo ushukela femu amandla Kyïv Polytechnic Institute, Kamenets-Podilski futhi Smilianski Isikhungo Sugar Industry. Lesi sikhungo kwadingeka chemical (ushukela refinery), Onjiniyela bamakhemikhali (imishini ushukela zokuwuhluza) nakwezomnotho amandla.
Ngo 1931-1935 the KISR ifakwe nezihlalo ukukhiqizwa kukashukela ka Kharkiv naseLeningrad kwetheknoloji Institutes, Kyïv esithengisa amaswidi kanye Ukuvutshelwa Institute, mechanical engineering faculty of Voronezh Chemical futhi Technological Institute Industry Ukudla, khono imishini yezolimo Bilotserkivski Agricultural Institute kanye mechanical engineering faculty of Poltavski Isikhungo Inyama Technology. V. Fremel kwaba Rector lokuqala Institute. Ngo 1930 sikhungo wavuma 450 abafundi.
Ngo 1935 ngesikhathi iminyaka engu yesihlanu isisekelo salo sikhungo saqanjwa Kyïv Technological Institute of Ukudla Industry yaqanjwa Mikoian (Ngempumelelo). Lesi sikhungo waba abasebenzi abaqeqeshiwe zokufundisa. academicians abavelele M. Boholubov, M.Ptukha, M.Kravchuk wasebenza khona.
Inkambo postgraduate kwavulwa 1933 futhi omunye abazobhapathizwa lokuqala isayensi babe G. Zmanenski, I.Litvak, V.Popov nabanye. F.Stefanski, naye owayethweswe iziqu kusukela KTIFI, ephethwe sikhungo. Ngo 1932-1941 sikhungo abaqeqeshiwe 2535 zezomnotho, tehnologists futhi onjiniyela mechanical wayephakathi engcono USSR izikhungo zemfundo ephakeme amabili.
Phakathi nezikhathi ezinzima WWII, abasebenzi yokufundisa, abafundi kanye abaphothula KTIFI ukuboniswa isibindi nokuzidela ekulweni abahlaseli undlovukayiphikiswa futhi abaningi babo balahlekelwa ukuphila kwabo. othisha bashiye nabafundi zaqhubekela phambili nomsebenzi wazo futhi sitadishe futhi wenza ezibaluleke aba nesandla ekuthuthukeni kwalo ukuhlinzekwa yempi futhi bakhulise nge ukudla imithi.
Ukukhiqizwa KTIFI futhi trainingfacilities babhujiswa ku sempi kodwa sibonga usizo isimo futhi emizamweni ehlangene othisha kanye nabafundi sikhungo ngokuphelele lakhiwa kabutjha indawo entsha. Lesi sikhungo kwelulwe kakhulu futhi yaba enye yezindawo ehola imfundo ephakeme institutionswhich onguchwepheshe oqeqeshiwe ukuze wonke amagatsha eziyinkimbinkimbi ezolimo kanye kwezezimboni UkSSR nezinye USSR republic. ukwakhiwa entsha eholwa Rector mina. Hrytsiuk.
Ngo-1950 no-1960 izakhiwo sikhungo kwavuselela, kuhlanganise isakhiwo esisha sikhungo, abafundi 'ehostela kwathi izindlu ezimbili yokuhlala kothisha. Ngo 1964 Institute lakha isakhiwo sokuhlala esisha zemfundo, hholo umhlangano kanye eziyinkimbinkimbi ezemidlalo. Indoda isakhiwo esisha laboratory wasungula e 1967.
amakhono okusha avuleka (ukushisa ezimbonini kanye wobunjiniyela, ezishintshayo imishini eyinkimbinkimbi yamakhemikhali nezobuchwepheshe izinqubo), izihlalo entsha nangemicabango ayehlelwe, kanye nokuqeqeshwa kothisha Computing ayeseqalile.
ucwaningo olunzulu workwas ezithwalwa sikhungo nekghono umnotho omkhulu wayevuka kasikhombisa ku 1965-1970 njengoba kuqhathaniswa nesikhathi sangaphambilini.
umsebenzi Sikhungo ubekhona: sikhungo imincintiswano ezemidlalo kanye amaqembu umnyango yayiqhutshelwa; club yomfundi, umtapo esikhulu kwegazi sikhungo iphephandaba "Promin '" (ray) waqala ukudlala indima ebalulekile empilweni abafundi.
1975-1990 babe zeminyaka ekuqubukeni komoya ukuthuthukiswa kwe-KTIFI sibonga umsebenzi mina. oyisiphukuphuku, udokotela wesayensi lobuchwepheshe, academician Ukraine Academy of Sciences Agrarian, nobesendaweni ikhanda walesi sikhungo iminyaka engaba ngamashumi amathathu.
Kule nkathi, emagcekeni sikhungo kabili, amahostela entsha, isakhiwo ezemidlalo kanye isakhiwo esisha zemfundo avuleka. Isakhiwo sikhungo futhi umqondo ukuqeqeshwa Uchwepheshe BakaJehova babebizwa kakhulu washintsha. amakhono okusha kwangena, izihlalo entsha nangemicabango avuleka, izikole ezintsha lobuchwepheshe nasemakolishi abangu lithathwa sikhungo. Sikhungo Consulting izikhungo nangemicabango extramural Kwamiswa emadolobheni ehlukene Ukrainian namadolobha.
ukunakwa Omkhulu sakhokhwa isingeniso yezindlela ezintsha zokufundisa, ekuhlela nekuhlelenjiswa kwalokucuketfwe abafundi self-aqondiswe learningof, ukusetshenziswa ubuchwepheshe lelisincumo ithelevishini ezemfundo. Lo msebenzi uhlanganisa ukucwaninga abafundi ukuthi kuthambekele ukuzuzwa imiphumela esisebenzayo: amaphrojekthi iziqu kuhlanganisiwe izakhi ucwaningo lwesayensi futhi umsebenzi umfundi design bureau babeba matasa.
izindlela ezintsha inhlangano umsebenzi ucwaningo kwangena. Kube yenguquko ukusuka ngabanye umsebenzi esihlalweni ezindabeni ucwaningo emsebenzini ihlanganiswe izihlalo eziningana ukuze uxazulule izinkinga ezinkulu emnothweni kazwelonke. Kwakuthinta lula ukwakheka zemfundo, izakhiwo zesayensi kanye ukukhiqizwa. 293 abaqambi izitifiketi ayenikezwa othisha sikhungo nabafundi 1970s. Inqubomgomo ebalulekile zocwaningo laboratory, Umiswe 1978-1980s., laliyisikhungo ucwaningo lwesayensi.
Ngo 1980 the KTIFI ukuthi lihlotshiswe Order of Red Banner wezeMisebenzi udumisa amasevisi zayo ngokuthi imbangela yokufundisa imfundo ongoti oqeqeshiwe umnotho kazwelonke futhi ngesikhathi 50 ngonyaka yokugubha usuku isisekelo salo.
Ngo 1993 the KTIFI unikwe isimo enyuvesi and saqanjwa ngokuthi inyuvesi Ukrainian State of Food Technologies (USUFT).
Ngokwe Decreeof uMongameli Ukraine №266 / 2002 of19 March2002and ikhumbula ukuqashelwa zikazwelonke nezamazwe ngamazwe womsebenzi walo kanye negalelo layo abalulekile ekuthuthukiseni imfundo kazwelonke kanye isayensi USUFT unikwe isimo inyuvesi kazwelonke Yaphinde yaqanjwa ngokuthi i-National University of Ukudla Technologies (rationality).
Njengamanje le NUFT iyona kuphela inyuvesi lobuchwepheshe e-Ukraine esihlinzeka trainingof Bachelors futhi okuyinhloko 32specialitiesand 30 ukudla specializationsfor, inyama, idayari, yezemithi, amagatsha microbiological nezinye eziyinkimbinkimbi agroicultural nezezimboni kanye ukudla ibhilidi umshini Ukraine. Mayelana 17thousand abafundi ukufunda eNyuvesi ngesikhathi salo okugcwele extramural faculties.The University zihlanganisa 2 Institutes of postgraduate Education, 9 ikhono extramural futhi 11 zobuciko nasemakolishi elise amadolobha ehlukene Ukrainian.
Uyafuna xoxa National University of Ukudla Technologies ? Noma yimuphi umbuzo, imibono noma ukubuyekezwa
National University of Ukudla Technologies kumephu
Izithombe: National University of Food Technologies Facebook ezisemthethweni
National University of Ukudla Technologies Izibuyekezo
Joyina ukuxoxa National University of Ukudla Technologies.